Vaovao - Mampiseho an'i Shina 2020 any SHANGHAI
Fampirantiana an'i Shina 2020 any SHANGHAI
IE expo China 2020 any SHANGHAI
Amin'ny maha seho tontolo iainana nalaza an'i Azia azy, ny IE expo China 2020 dia manolotra sehatra fandraharahana sy tambajotra mahomby ho an'ireo matihanina sinoa sy iraisam-pirenena eo amin'ny sehatry ny tontolo iainana ary miaraka amina fandaharana fihaonambe teknika-siantifika sy siantifika voalohany. Izy io no sehatra tsara indrindra ho an'ny matihanina amin'ny indostrian'ny tontolo iainana mba hampiroborobo ny orinasa, ny fifanakalozana hevitra ary ny tamba-jotra.
Miaraka amin'ny fitomboan'ny tinady amin'ny tsena sy ny fanohanana lehibe eo amin'ny sehatry ny tontolo iainana avy amin'ny governemanta sinoa, goavana ny tombotsoan'ny orinasa amin'ny tontolon'ny tontolo iainana any Shina. Tsy isalasalana fa ny IE expo China 2020 dia «tsy maintsy» ho an'ireo mpilalao tontolo iainana mba hifanakalo hevitra sy hampivelatra ny orinasan'izy ireo any Azia.
Mifantoka bebe kokoa amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny toetrandro i Shina. Ny IE expo China 2019, izay niseho tamin'ny 15 ka hatramin'ny 17 aprily tao amin'ny Shanghai New International Expo Center (SNIEC), dia naneho mazava tsara izany. Nandritra ny telo andro nanaovana ny hetsika, 73.097 ireo mpitsidika ara-barotra avy amin'ny firenena sy faritra 58 nahatratra ny fironana sy ny fanavaozana ny teknolojia amin'ny sehatry ny haitao tontolo iainana Aziatika. Ny IE expo dia nahitana fiakarana fampirantiana sy habakabaka ihany koa ny fampirantiana: miisa 2 047 ireo miseho amin'ny habaka fampisehoana 150.000 metatra toradroa (efitrano fampirantiana 13).
Ny IE expo China 2020 dia hotontosaina amin'ny 13-15 aogositra ao amin'ny Shanghai New International Expo Center (SNIEC) any Shanghai, izay handrakotra ny tsena rehetra mety misy amin'ny tontolo iainana:
Fitsaboana rano sy rano maloto
Fitantanana ny fako
Fanarenana ny tranokala
Fanaraha-maso ny fandotoana ny rivotra sy ny fanamasinana ny rivotra